Wakiilka Philippe Coutinho oo ka hadlay wararka xanta ee ku aadan in xiddiga reer Brazil uu ku biirayo PSG – Gool FM
(Spain) 03 Luulyo 2019. Wakiilka Philippe Coutinho ee Kia Joorabchian ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wararka xanta ah ee lala xiriirinayo in xiddiga reer Brazil uu ka tagayo kooxda Barcelona inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wageyska “sports” ee dalka Spain ayaa soo wariyay in Philippe Coutinho uu ogolaaday ku biirista kooxda reer France ee Paris Saint-Germain, si uu qeyb kaga noqdo heshiiska uu Neymar Jr dib ugu soo laabanayo garoonka Cump Nou.
Xiriirka u dhexeeyay Neymar Jr iyo maamulka kooxda Paris Saint-Germain ayaa gaaray meesha ugu xumeyd, taasoo keentay inuu raboodo dib ugu laabashada Barcelona.
Si kastaba ha ahaatee, wakiilka ciyaaryahanka ayaa beeniyay inuu xiriir dhex maray iyaga iyo maamulka PSG.
“Maalmo kahor ayaan kula hadlay José Segura magaalada Barcelona, wuxuu ii sheegay in kooxda aysan dooneynin inay iska iibiso Philippe Coutinho suuqan xagaaga, iyadoon loo eegeynin wax walba, dhinaca kale ma jiraan wax xiriir ah ee ina dhex maray kooxda PSG”.